Iji satnav ọ na-emebi ikike ọgụgụ isi anyị? - Nzuzo
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Iji satnav ọ na-emebi ikike ọgụgụ isi anyị?
Ole n’ime ndị na-agụ ederede a maara ihe onye na-anya satịlaịtị? Eleghị anya kemgbe, ebe ọ bụ na emegoro ka ndị njem ụzọ ụgbọ ala nke mbụ ruo taa, onye ọ bụla nweela ike ịhụ onwe ha ihe akụrụngwa a na-enye gị ohere ịme, na-ekelekwa ọnụnọ ha na ama (Google Maps, ọmụmaatụ),
Ọ bụrụ na anyị nọ na ọgbakọ anyị wee jụọ mmadụ ole ejirila onye na-anya satịlaịtị kwaga n'ime ma ọ bụ n'obodo, anyị ga-ahụ aka onye ọ bụla.
Ma ọ bụrụ na anyị jụrụ ole ha na-eji emekarị ngwa a, aka ya na aka dị elu ga-adị ọtụtụ, ikekwe nke ọtụtụ ndị nọ n'ime ụlọ ahụ.
Echiche zuru ebe niile, ọ bụghị naanị n'etiti ndị ọkachamara, bụ na ojiji nke onye na-ebugharị Satellite "umengwụ" ụbụrụ. Ma, ọ̀ bụ eziokwu?
Dahmani na Bohbot ha nwara inyocha ya na nnwale ma, karịchaa, ha nwara ịghọta ma ọ bụrụ na ojiji nke sat nav na-eme ka ikike ọgụgụ isi gị ka njọ.
Iji ghota ihe nyocha bu, agbanyeghi, echiche.
Mgbe anyị tụkwasịrị onwe anyị obi ma kwaga n'ọnọdụ ọhụrụ anyị na-adaberekarị n'ụdị ụzọ abụọ:
Space mnemonic atụmatụ. Ọ na-emetụta mmụta nke isi ihe na ọnọdụ ọnọdụ ha, si otú a na-atụnye ụtụ maka ịmepụta klọọkụ nke gburugburu. Skilldị nka nwere njikọ chiri na hippocampus, mpaghara ụbụrụ na-arụ ọrụ na ebe nchekwa episodic.
Atụmatụ mkpali. Ọ gbasara ịmụ usoro mmeghachi omume eletriki sitere na otu ọnọdụ (dịka ọmụmaatụ "atụgharị aka nri, gaazie n'ikpeazụ ma emesịa tụgharịa aka ekpe"). Ike a nwere njikọ chiri anya na caudate nucleus, mpaghara ụbụrụ na-akpata usoro mmụta (dịka ọmụmaatụ, ịgba ịnyịnya ígwè).
Also nwekwara ike inwe mmasị na: ADHD afọ 20 mgbe nchọpụta nchoputa. Nsonaazụ ya na nnata ego
Seconddị nke abụọ na-eduga n'omume ndị ọzọ siri ike mana ọ ga-eme ka anyị kwaga na gburugburu amara dị ka à ga-asị na anyị nọ na autopilot.
Ugbu a, ka anyị gaa na nyocha ...
Dahmani na Bohbot n'ihe ọmụmụ anyị na-ekwu maka ya, anakọtala ọtụtụ ozi ndị bụ ndị kachasị:
Data sitere ajụjụ atụnyere ọnụọgụ elekere nke iji onye ọkwọ ụgbọ ala na - ele ihe anya, ọ dabere na ojiji ya na nghọta nke inwe ụzọ nghazi.
Anwale ule kompenira iji tụlezie usoro ikuzi, mmụta ụzọ na ụdị usoro ikuziri.
Ejiri nnwale ndị a niile, akpịrịkpa na ajụjụ ajụjụ ugboro abụọ, otu afọ na atọ, ka ha wee lelee mgbanwe ndị oge na-aga.
Ka anyị gaa ugbu a lee nsonaazụ ya:
Ndi mmadu kwuru na ha ji ihe ndi ozo ndi ozo bu ndi n’emebi ule nke komputa n’uche ha eruteghi iji usoro omumu ihe omimi. Ekwuputara onu ogugu a site na nbenye nke onu ogugu na ederede computerized (n’agbata nyocha abuo a ka abali ato gasiri) rue ojiji nke onye ugba (ihe kariri afo ato). N’aka ozo, ndị mmadụ ejirila onye na-akwọ ụgbọ mmiri n'ime afọ atọ ahụ nyocha ahụ mere, ka otú usoro ha si hazie na ule kọmputa ji belata..
Dika ihe ndi ugbo elu ugbo elu ji eme ihe, ihe eji eme ihe bu ihe ndi mmadu n’ebu ibu (megidere iji usoro na -elekọta ọghọm Spenal Spenal mnemonic). Nke a bụ n'ihi na GPS ịnyagharị yiri ka ojiji nke usoro nzaghachi mkpali ma ọ bụ, opekata mpe, ọ na-arụ ọrụ na sistemụ ụbụrụ onwe ha.
You jiri ọtụtụ ihe ịgagharị sataji satịlaịtị na-eme, ị ga-enwekwu ike ịmepụta ebe ịma ihe. Nke a na-egosi na iji GPS na-ebelata ikike iji mepụta ihe nnọchi anya nke gburugburu ya.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Etu esi elelee ebe nchekwa ogologo oge: nnwale ejiri
Ndị ji GPS eme ihe adịchaghị enwe ike ịghọta ihe ntụaka maka ịme onwe ha
Ka ọnụ ọgụgụ awa nke onye na-ebugharị satịlaịtị na-amụba, ikike nke ịmụta ụzọ ọgbara ọhụrụ si belatara.
Na mkpokọta, nsonaazụ nke nyocha a na-egosi na iji onye na-anya satịlaịtị eme ihe mgbe niile na-emebi ikike anyị nwere ịmụ ụzọ gasị ọhụụ na isi onwe anyị.
Dahmani, L., & Bohbot, VD (2020). Iji GpS eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma na-emetụta ebe nchekwa ohere mgbe a na-agagharị onwe. Akụkọ sayensị, 10(1), 1-14.
google map, onye na-anya ugbo elu, nghazi oghere, ntụzi aka
Iji satnav ọ na-emebi ikike ọgụgụ isi anyị?2020-05-012020-05-12http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/05/utilizzare-il-navigatore-satellitare-peggiora-le-nostre-capacit-cognitive.jpg200px200px
MMSPE. Ngwá ọrụ nyocha ọhụụ maka ụmụakaEdemede, Ntụle